ISBN: Inona izany, inona no ilana azy ary inona ny lanjany | Ireo mpamaky rehetra
Teny iray izay matetika sendra antsika eo amin'ny tontolon'ny boky dia ny ISBN. Azo antoka fa mihoatra ny iray aminareo no efa nandre ireo tononkira efatra ireo indraindray. Na dia mety tsy mahalala ny dikan'izany aza ny olona maro. Noho izany, hazavainay eto ambany hoe inona izany.
Amin'izany no ahafahanao mahafantatra ny mahasoa sy ny maha-zava-dehibe azy. Ho fanampin'ny fisian'ny motera fikarohana ISBN. Ireo fampahalalana rehetra ireo dia hanome anao fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny indostria ankehitriny.
1 Inona ny ISBN?
2 Sangan'ny ISBN
3 Fa inona ny ISBN?
4 Karazana fanontana inona no mampiasa ISBN?
5 Masinina fikarohana ISBN
Inona ny ISBN?
Ny ISBN dia kaody fenitra iraisam-pirenena ho an'ny boky (Nomeraon'ny boky iraisam-pirenena). Ity kaody ity dia miasa ho toy ny mampiavaka ny boky. Noho izany, noho izany dia voaray araka ny tokony ho izy ny fanontana isaky ny asa (lohateny, mpanoratra, sns.). Ankoatry ny fanampiana rehefa miresaka manatsara ny famokarana fanontana. Satria izy io koa dia manampy amin'ny fanatsorana ny logistics.
Noho izany, hitantsika fa ny ISBN dia kaody izay manampy antsika hamantatra boky manokana. Na dia zava-dehibe aza ny fahafantarana fa ity kaody ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny asa manokana, fa isaky ny fanontana manokana azy. Ka miankina amin'ny fanontana ny boky dia ho hafa ny ISBN, na dia mitovy aza ny boky.
Ankoatra izany, Kaody izay manamora ny fitantanana ireo mpaninjara sy trano famakiam-boky. Raha ny marina, na dia tsy voatery hananana boky aza izany, maro ny fivarotam-boky ankehitriny no tsy manaiky ny hivarotra boky izay tsy manana kaody. Raha manana izany dia mora kokoa ny fitantanana.
Hatramin'ny taona 2006, dia nisy isa 10 ny ISBN. Na dia nanomboka ny volana Janoary 2007 aza dia napetraka fa tsy maintsy manana totalin'ny 13 isa. Zavatra mbola manan-kery ankehitriny. Izy ireo dia isaina amin'ny alàlan'ny rafi-matematika manokana ary asio tarehimarika fanamarinana izay tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana ny kaody.
Araka ny efa nolazainay taminao, dia totalin'ny 13 isa. Amin'ny ankapobeny, ny ISBN dia misy singa dimy misaraka amin'ny toerana iray na tsipika. Ho fanampin'izany, ny telo amin'ireo singa dimy ireo dia mety manana halavana hafa. Ireo no singa asehon'ity karazana kaody ity:
tovona: Ity singa ity dia 3 isa foana. Ary koa, amin'izao fotoana izao dia 978 na 979 ihany.
Raketo ny singa ao anaty vondrona: Ity no singa manampy amin'ny famantarana faritra ara-jeografika (firenena, faritra ...) na faritra misy fiteny manokana izay mandray anjara amin'ilay rafitra. Amin'ity tranga ity dia mety eo anelanelan'ny 1 sy 5 ny halavany.
Singa mpihazona: Izy no tompon'andraikitra amin'ny famantarana ny mpanonta na ny mpanonta. Mety hahatratra 7 isa ny halavany.
Handefa entana: Ity singa ity dia mamantatra fanontana manokana sy endrik'ilay asa. Mety hahatratra 6 isa ny halavany.
Dika fanaraha-maso: Io no tarehimarika farany ary tokana manamarina ny ambin'ny isa. Noho izany, ny lanjany dia avo indrindra. Izy io dia isaina amin'ny alàlan'ny rafitra Modulus 10 miaraka amin'ny lanjan'ny 1 sy 3.
Fa inona ny ISBN?
Etsy ambony dia efa nilaza taminay izahay fa ny ISBN dia kaody izay ny asany lehibe indrindra dia ny miasa ho toy ny famantarana. Io no asan'ity kaody ity. Izy io dia ampiasain'ny mpanonta, fivarotana (an-tserasera sy ara-batana) ary koa mpikambana hafa ao amin'ny rojom-barotra. Noho io kaody io dia afaka mamantatra ny vokatra. Ankoatry ny fitandremana azy io amin'ny baiko, amin'ny varotra (mba hitazomana ireo singa amidy sy ireo ao amin'ny trano fanatobiana entana).
Tetikasa Gutenberg: e-boky amin'ny sehatra ho an'ny daholobe
Noho izany, singa iray manamora ny fomba fitantanana boky izy io. Ankoatry ny maha singa tena ilaina azy rehefa mitady boky. Satria afaka mampiasa ny ISBN isika na amin'ny magazay na amin'ny tranomboky mba hitadiavana boky manokana.
Karazana fanontana inona no mampiasa ISBN?
Izay boky azo ampahibemaso dia afaka mampiasa ISBN. Tsy maninona na maimaimpoana ity boky ity na raha misy vidiny amidy. Ity kaody ity dia azo ampiasaina foana hamantarana ireo asa voalaza ireo. Ho fanampin'izany, ny fizarana manokana (toko, lahatsoratra amin'ny magazine na serial) dia afaka mampiasa ilay kaody raha tiany. Saingy araka ny efa nolazainay teo aloha, tsy voatery.
Raha ny endrika lahatsoratra ho an'ny e-book dia tsy voatery ihany koa. Raha ny marina dia mahita fivarotana boky an-tserasera izay tsy mitaky kaody ISBN izahay ary tsy mampiasa azy. Na dia, amin'ny ankapobeny dia hitantsika fa maro aapetraho fa ireo endrika eBook ireo dia mampiasa ilay kaody ihany koa. Saingy matetika io dia fanapahan-kevitra miankina amin'ny mpanoratra.
Ary koa, zava-dehibe ny fahalalana izany Mandany vola ny ISBN. Raha ny tranga Espana dia tokony handoa 45 euro eo ianao. Ho an'ny maro, dia mety ho vidiny tsy takian'izy ireo izany, ka afaka mandray fanapahan-kevitra izy ireo. Saingy mihevitra izany fa tsy ho ao anaty tahiry ny boky. Noho izany dia tsy hita toy izany ny fomba. Zavatra mety hametra ny fiantraikan'ny boky eny an-tsena.
Masinina fikarohana ISBN
Azontsika atao ny mitady boky mampiasa ny ISBN. Fomba tena ilaina hitadiavana boky ao anaty tahiry na any amin'ny magazay na tranomboky. Inona koa, manana milina fikarohana ISBN izahay, na amin'ny tranokalam-panjakana na amin'ny pejin-tranokala fivarotana sasany. Amin'izay isika dia afaka mampiasa ireo fitaovana ireo hamantarana ilay boky tadiavintsika.
Any Espana dia manana maso ivoho ISBN izahay. Mikarakara ny raharaha rehetra mifandraika amin'ity kaody ity, manomboka amin'ny fisoratana anarana ka hatramin'ny fikarohana. Azonao atao ny mitsidika ny tranonkala hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba izany, amin'ity rohy. Ankoatra izany, ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, kolontsaina ary fanatanjahantena mihitsy dia manana tahiry azontsika ampiasaina hitadiavana boky miorina amin'ny ISBN, na hikarohana boky hahitana ny kaody ISBN-ny. Azonao atao ny mitsidika ny tahiry ary ny motera fikarohana ao aminy eto.
Ho fanampin'izany, manana safidy manokana ihany koa izahays. Manana tranokala fivarotam-boky izahay izay mamela anay hikaroka amin'ny alàlan'ity kaody ity. Ny iray amin'ireo safidy ilaina indrindra izay manampy antsika hahita boky ary aiza no hividianana azy ireo dia ny bokinao rehetra, afaka jerenao ny tranonkala eto. Noho ireo fitaovana ireo dia afaka mahita boky manokana tianao hividy ihany koa ianao. Ho fanampin'izay, manana fivarotana toa an'i Casa del Libro ihany koa izahay izay mamela anay hikaroka amin'ny alàlan'ny kaody.
Manantena izahay fa nahasoa anao ity fampahalalana ity raha ny amin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny ISBN ary ny fitaovana arosony antsika. Araka ny hitanao dia nanjary ampahany lehibe amin'ny indostria izy ireo, satria manolotra tombony be ho an'ny antoko rehetra voarohirohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » General » Fa inona ny ISBN ary inona no ilana azy?
Tsy handeha hatory ianao raha tsy mahafantatra zava-baovao ... fantatra fa tsy fantatra fa rafitra fampahafantarana izany fa tsy zavatra hafa.
Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Ny voalohany, marina?
Eder Esteban dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny hevitrao! Faly aho fa nanampy anao hahita bebe kokoa momba ny ISBN!
Eny tokoa, ny voalohany, na dia tsy ny last farany aza
Valiny tamin'i Eder Esteban
Jorge Rios dia hoy izy:
Fampahalalana tena tsara izay tokony ho fantatry ny mpitantana fampahalalana rehetra, mpianatra amin'ny siansa famakiam-boky, siansa fampahalalana, arivolojista, mpanoratra, tonian-dahatsoratra, mpanao gazety, ankoatry ny hafa, ny maha-zava-dehibe ny kaody ISBN izay midika izany araka ny fanafohezana azy. ), inona ny asany ary inona izany. Ity fahalalana ity dia tsy maintsy ampitaina amin'ny olon-drehetra izay handray anjara amin'ny fitantanana ny fampahalalana amin'ny trano famakiam-boky sy ny asan'ny mpampiasa. Ho an'ny olona miasa amin'ny fivarotam-boky, foibe antontan-taratasy sy fampahalalana, tranombakoka ary andrim-panjakana mifandraika amin'izany.
Ao amin'ny tranomboky, ny librarians koa dia afaka mampahafantatra azy amin'ny besinimaro, amin'ny alàlan'ny takelaka fanaovana bilaogy, bilaogy ary fomba hafa. Eny, ity kaody ISBN ity dia manome andiana fampahalalana momba ilay boky, izay tokony ho fantatsika sy hararaotintsika rehetra.
Mamaly an'i Jorge Ríos
Misaotra betsaka amin'ny hevitrao Jorge! 🙂
Loyda Penafiel Colom dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ity lahatsoratra ity. Tena ilaina izany. Miarahaba.
Valiny tamin'i Loyda Peñafiel Colom
Misaotra betsaka anao nanome hevitra! Faly aho fa nahasoa anao io! Miarahaba!
Angel casanova dia hoy izy:
Feno fankasitrahana aho raha azonao ampahafantaro ahy ny fomba hiarovako, raha sendra misy tranga hafa, boky vaovao noforoniko, mbola tsy navoaka na novaina, ny kopiko omeko ny mpandika teny vahiny hahafahany mandika izany amin'ny Anglisy ary avy eo manitsy azy amin'ny fiteny na aiza na aiza itiavany azy.
Miandry ny valinteninao aho, misaotra betsaka mialoha
Valiny tamin'i Angel Casanova
Inona ny rakitra ACSM? Ahoana no ahafahanao mandeha amin'ny PDF?